Dhab ahaantii miyaanu ku dhajineynaa habka 'hal-abuurka' marka ay timaaddo 3D Muuqaalka? - Gofumed
Dhab ahaantii miyaanu ku dhajineynaa nidaam "hal-abuur" marka ay timaado 3D Meelaha?
Sebtember, 2017 Geospatial - GIS, tabo cusub, egeomates My
"Riixitaanka badhanka ayaa leh awood u leh inuu furo cabbir kale" qor, ku dhawaad ​​dhamaadkiisa maqaalkiisa, Muthukumar Kumar, oo si gaar ah u tilmaamaya abuurista 3D bay'adaha, faa'iidada, muhiimadda iyo mustaqbalka.
Ogsoonow inaad ka hadashid mustaqbalka, oo ah hab aan ka fogeyno shaashadda fudud, waxaa loo baahan yahay in ereygan yahay dhammeystirid midka kale (yada) siiya culeyska iyo aaminka lagama maarmaanka ah ee xirfaddayada xirfadeed ee dalbaday. Tani waa meesha ereyga "hal-abuur". Su'aasha ayaa soo baxday: Marka "wax" la siin karo sifooyinka cusub?
Muxuu yahay fikirka cusub ee fikradda
Soo jeedin iyo xiiso leh maqaal oo ku kordhiya macluumaadka looga baahan yahay faallooyinkaan ayaa sheegaya in "Hagaajinta waxay ku taalaa isgoyska saddexda adduunka: suuqa, tiknoolijiyada iyo fulinta waxtarka leh".
Marka la raacayo weedha oo leh sawirka la muujiyay, waxaa la xoojinayaa ka tres qaybaha waa in la soo bandhigo isla waqtigaas taas oo "wax" ah oo aan u qalmi doonno cusub. Sababtoo ah, sida qoraaga dhejiska u tilmaamayo:
"Qeybta ugu soo jiidashada leh ee casriga ah waa hal-abuurnimo, fikrad, dhiirigelinta iyo tiknoolajiyada cusub. Si kastaba ha ahaatee, fikradahaas waa qaybta ugu yar ee geedi socodka cusub. Qaybta ugu muhiimsani waa tallaabo, ka hirgelinta hufan. "
Wanaagsan Aan lahayn fulinta Wax walbana waa wax ka badan riyo roon in sugto maalin run ah. Aynu isweydiin nafteena: Ma ogtahay haddii wax laga hirgeliyo "deegaanka" ee 3D Meelaha? Meelaha ay tahay? Ma aragtay iyaga?
Haa, sababtoo ah marka loo eego isticmaalka (ama isticmaalay, ama ogaanshaha inay jiraan) labadaba ArcGis Pro sida Qgis2threejs si loo abuuro natiijooyin la taaban karo oo la arki karo ee 3D, taas oo ah, ka hadlidda horumarinta soo bandhigid ee xogta la falanqeeyay; marwalba way jiri doonaan (ama ay soo kicinayaan) baahi aan weli la xalin Karin oo sugeysa in ay saf u noqoto safka si ay u soo baxdo.
3D Muuqaal ahaan mashaariicda mustaqbalka ee macluumaadka iyo khibradaha
Kumar ayaa sheegay in "ay jiraan qaar horumarka xiisaha leh "ee 3D Muuqaalka. Horumarinta taas oo uu sharxayo, waxaanu u aragnaa sida isla markaan "marka aynu ku dhex jirno" qaab cayaareed Auto Xatooyo Grand. Noo ogolow in aynu ku darno in qaababkaasi ay yihiin kuwo la abuuray wax ka beddelidda ama abuurista aagagyo kala duwan oo ku saabsan waxa aan u aragno maalin kasta sida dhabta ah iyo waxtarka.
Taasi waa, waxaan halkan u jeedinaynaa labadaba Xaqiiqda Wicitaanka sida Xaqiiqada la kordhiyay, beeraha aqoonta bilawga ah, waan qirayaa, ma ahayn wax ka badan oo kaliya wargelinta. Taasi waa sababta qoraallada maanta. Waxaan qorsheynayaa inaan ka gudbo xuduudda, ka fakir "innovation", una gudbiso dhammaanba adiga, akhristayaasha naxariista leh. Halkaas ayaan tagnaa!
On khibradda immersive, metaverse iyo geedo kale
Waxaan dareemay in xaqiiqda dhejiska ah waxa loola jeedaa sheekooyin. Intee in le'eg xaqiiqda dhabta ahi waxay ku xirnaan doontaa haddii aan isticmaalno shaashadda kombiyuutarka ee fudud oo leh qalabkiisa ama qalabyada ku-xidhan oo abuuray shahaadooyin hore oo aan u isticmaali doonno si aan u soo bandhigno oo aan ugu noolaano xaaladdan. Ugu dambeyntii waa xaqiiqda dhabta ah ee sanadka, mid ka mid ah kaas oo user uu dareemo kicinta dareenka iyo nolosha waa sida dhabta ah dunida saddexda-cabbir ee la muujiyo.
La xaqiiqda la kordhiyay, dhanka kale, wuxuu ku darayaa walxaha asaasiga ah, oo abuuraya jawi "isku dhafan" waqtiga dhabta ah oo aan ka luminayno xidhiidhka "runta". Sidan ayaan ku muujineynaa macluumaad aan awoodi karno inaan aragno "xaalado caadi ah" taas oo kordhin doonta waayo-aragnimadayada.
Taariikhda dhabta ah ee macquulka ah ee dulsaaran ee Kumar ee maqaalkiisa waa kuwa isticmaala geolocation. Qodobka ugu muhiimsan halkan waa si loo go'aamiyo degaanka aan ku hayno. Fikradda ah metaverse. Fahmaan tan sida adduunka ah ee loo yaqaan 'virtual' (tusaaleyn ka mid ah midka dhabta ah) halkaas oo qofku la shaqeeyo dadka kale isagoo isticmaalaya a aqoonsi u muuqda garaaf ahaan ahaan sawir ama sawir loo yaqaan ' avatar.
Iyo in kastoo Matrix waa tixraac metaverse cinwaanka, xiiso badan, indhahayaga, waa tan loo abuuray ujeedooyin waxbarasho si ay u bartaan GIS una faalloodaan Esri's blog:
Kumar waxa loola jeedaa mashaariicda 3, oo ay sameeyeen shirkadda Mantle. Waxay ku xiran tahay bilowdeeda sida Ciyaaraha Horyaalka by Aasaasayaasha ay, mashruucan waxaa loogu talagalay in lagu abuuro kulan isticmaala geolocation soo bandhigay sadex dhinac user ee isku dayaya in ay ka ciyaari nooc ka mid ah mid dhab qabsiyo. Aad ugu dhaqsiyaha badan ay ogaadeen in Midnimada, bogga horumarinta cayaaraha caanka ah, ma jirin dad badan oo isticmaala khariidado. Waxa ay ahayd in fikradda ah inay abuuraan nidaam iyaga u gaar ah oo ay la socdaan, Mantle ayaa kacday.
Nidaamka bilawga ah wuxuu ka kooban yahay isticmaalka MapBox (Horreeyay go'iisii), la mid ah sida ay u habaynta by nooc ka mid ah xoqid pixels si ay u meel "prefabricated" uu ka samaysan yahay juqraafiga ee wadada magaalo hayo midabada image asalka ahaa.
Waxay ku qeexeen in niche, isticmaalka khariidadaha, loo isticmaali karo noocyo kala duwan oo aan ahayn ciyaaraha oo kaliya. Kumar wuxuu sharaxayaa xiga ku saabsan Mashruuca Brownsvillebulshada A ee Brooklyn, New York, halkaas oo, ay sabab u tahay kala sarayn iyo adkayn guryahooda iyo la'aanta ah ee qorshaynta sax ah by masuuliyiinta, ayaa waxaa ahbaa meel ka mid ah saboolnimada adkeeyay iyo dembiyada ee -darrada ah ee dadka waa halis maalin kasta.
Waxaa loo baahan yahay in ay soo bandhigto xaaladda this dunida si oo aan la dareemin ama aakhirka isagoo haysta ee warar ah u mari lagay in dhowr maalmood. Markaasaa waxaa u uuraysatay foom kala duwan ee isgaarsiinta in inkastoo laga fekerayo ah oo ku saabsan xaqiiqada dhabta ah ee ku cad dhacdaa, tani waxaa la muujiyay in dheeraad ah soo jiidasho leh hab, cayaar, in "jillaab" ee ay soo bandhigay iyo jebin qorsheyaasha iid iyo linearity nooca warbixinta news documentary ah.
Si loo dhammeeyo, qof kasta oo degane ah wuxuu abuuri karaa sheekadoodii oo isku mid ah oo lagu sharaxay qaabka "dukumeentiga isdhexgalkaThedukumiintiyada"(Aad loogu isticmaalo barnaamijyada xaqiiqda sida" Big Brother ", tusaale ahaan) halkaas oo ay cilinta kartaa deegaanka jirka muujinaya cadaadiska maalin walba ay ku nool xaafadda iyo u sheeg sheekooyin ka eeg aragtidaada. Sidaa daraadeed, iyada oo loo marayo Mantle iyo Unity, waxay awoodeen inay dib u helaan kormeerka deegaanka si ay u sheegaan sheeko, marka ugu danbaysa, inay bedeli karaan booskooda si wanaagsan.
Si loo gaaro waxa loogu yeero jilitaanka baabuurta madaxbannaanGo'iisii ​​bixiyo sida awoodda qiimaha-daray in ay u fasiraan nidaamka multifeed (Iskudarka) of layers map in la abuuro qayb muhiim ah oo kiiska ka mid ah oo isticmaalaya deegaanka dalwaddii sida a "isgoyska gaar ah" ama dhulluxyo shil og yahay in diyaar u ah waxaa laga yaabaa in si ay u tababaraan in daqiiqado ama saacado halkii maalmo ama toddobaadyo.Mashruucii ugu dambeeyay ee lagu xusay Kumar ayaa la xiriirta warshadaha baabuurta. Gaar ahaan suurtagalnimada in lagu shaqeeyo simanada baabuurta ee iskood u goyn kara. Laakiin si loo abuuro loona tijaabiyo goobaha is-qabanaya, waxaan u baahannahay inaan ogaanno sida bani-aadamku u dhaqmayo horayba. Waa inaanu "u hoggaansamaa" habka aadanaha ee xaaladaha kala duwan. Tani waxay dib usoo celinaysaa garoonka AI (Sirdhaad dabiici ah) kaas oo loola jeedo inuu soo saaro habdhaqanka maskaxda aadanaha. Tan waxaan ku daraynaa Barashada Mashiinka maxaa yeelay mashiinnadu waa inay awoodaan inay aqoonsadaan dabeecadaha dabeecadooda naftooda iyo "saadaalinta" dabeecadaha.
Oo markii kooxo shirkado badan oo hore u leedahay labadaba unugyo jirka iyaga u gaar ah sida nidaamyada camera baabuur, waxay si toos ah bixiyay kartaa in jawi go'iisii ​​iyada oo suurtagal ah oo tababar ah in aragtida iyo prototypes.
Tallaabooyinka ku wajahan mustaqbalka suurtagal ah isla markaana la jecel yahay isla wakhtigaas
Kumar gebogebeeyay, in "fikradaha laga bilaabo dhismaha Qabille oo a si ay u tijaabiso driving goboleedka oo ay ku jiraan algorithms navigation, si ay kulan dhismaha VR meesha aad noqon kartaa meel kasta oo dunida ah oo isu quusin in waayo-aragnimo u baahan qalabka qaar ka mid ah iyo awoodaha halis ah. "
Inkasta oo laga yaabaa in muuqan fog ka our xaqiiqda, runta waa in ay jiraan waayo-aragnimo ah. Laakiin xal meel-ku-saleysan lagu saleyn karaa jawi our maalin kasta u baahan yihiin ma aha oo kaliya maraan shaashadda cusub laakiin jiitaan dareenka kuwa ka dhigi kara mashaariic kuwan dhab ah.
Taasina waa sababta qoraagu ku adkaysanayo laba shay:fududayn"Iyo"utility". Easy sababtoo ah si aad uhesho 3D meelo la heli karo, waa mid aad ufiican oo faa'iido leh "waa inaad hoos u dhigtaa ama yareeysaa caqabada jirta si aad u sameysid tijaabo; waa inay noqotaa 'fududahay in la ciyaaro oo la sii daayo'. Kadibna wuxuu ku daray, "marka kaliya ee abuuraayo noocyada oo dhan waxay tijaabin karaan kadibna waxay dhisi karaan xalalka tijaabooyinka ku jira arrimo ilbiriqsi ah, dadwaynaha guud ayaa ka faa'iideysan kara"
Intaa waxaa dheer, 3D Saacadda waa in ay ka gudbaan qashinka utility, taasi waa marka ay isticmaalayaashu ubaahan yihiin maalin kasta waxayna isticmaali karaan si fudud iyada oo aan ka fikirin; waa marka ay dhab ahaantii noqon doonto mid bisil oo diyaar u ah isticmaalka muhiimka ah. Waxaan ka hadleynaa imtixaanka caanka ah Larry Page waa in la fuliyaa oo la ansixiyaa
Waxaan weydiistaa akhristaha Geofumadas, ma adigaa ku hagaya dadaalkaaga si aad tan u gaarto ruux cusub Taas oo aan u gudbineyno shaqadaada xirfadeed?
Post Previous«Previous Tiknooloojiyada Geospatial, Doorka iyo muhiimadda ku jirta habka IT-ga ee Waaxda Gaadiidka.
Post Next Doorashada Bixiye ee Magangalyada - Khibradda ShakhsigaNext »